Custom Plastic Moulds Vagadziri uye vanotengesa - China Custom Plastic Mould Mould Factory
Tsika epurasitiki kuumbwa ndiwo maturusi anoshandiswa mune dzakawanda zvigadzirwa maindasitiri kugadzira epurasitiki zvikamu. Mafuru anofanirwa kugadzirwa uye kugadzirwa kuti agadzire zviuru zvezvikamu zvepurasitiki pamusoro pehupenyu hwechigadzirwa.
OEM Precision Plastic Mould / Mould China Mugadziri
Vashandi vedu vane ruzivo rwekugadzira uye kugadzira mhando dzakasiyana siyana dzeforoma.
Nekuchengeta kushamwaridzana kwepedyo nevatengi, inogona kuve nechokwadi chekuti yekutanga vhezheni yechigadzirwa chekupedzisira inenge yakakwana.
YF Mould inopa tsika jekiseni muforoma yekugadzira masevhisi zvinoenderana nezvaunoda zvekushandisa zvinyorwa.
Yuanfang anga achiburitsa tsika yepamusoro epurasitiki jekiseni muforoma yevatengi kutenderera pasirese kubva 1996.
Isu tiri inotungamira Chinese jekiseni muforoma mugadziri iyo inopa yepamusoro tsika muforoma kugadzira uye nemazvo epurasitiki jekiseni kuumbwa sevhisi.
Isu tiri nyanzvi dzinoshuvira kuwana yakanakisa tsika yekugadzira epurasitiki nzira kune wega mutengi, chigadzirwa chimwe nechimwe, bhajeti, chirongwa uye chinangwa. Chikwata chedu chakakura chakasimba mumatambudziko uye chakabudirira muzvirongwa zvakaoma.
Tsika epurasitiki kuumbwa ndiwo maturusi anoshandiswa mune dzakawanda zvigadzirwa maindasitiri kugadzira epurasitiki zvikamu. Mafuru anofanirwa kugadzirwa uye kugadzirwa kuti agadzire zviuru zvezvikamu zvepurasitiki pamusoro pehupenyu hwechigadzirwa. Mazhinji mafuru akagadzirwa nesimbi yakaoma, aluminium, kana mamwe maalloys esimbi. Simbi maumburu anodhura, asi anogara kwenguva yakareba uye anogona kuburitsa zvimwe zvikamu muhuwandu hwakawanda. Zvichienderana nechinangwa chechikamu, simbi yemhando yepasi kana aruminiyamu inogona kunge iri isingadhuri sarudzo, kunyanya kana zvido zvevhoriyamu zviri zvakaderera.
Yuanfang Technology, Chinese muforoma mugadziri iri Shenzhen, anotsaurira jekiseni muforoma tooling, kugadzira uye epurasitiki jekiseni Kuumbwa masevhisi, inopa tsika jekiseni muforoma kugadzira uye epurasitiki zvikamu kugadzirwa kwemakambani epasirese.
• CAD dhizaini / chakuvhuvhu kuyerera kuongorora / DFM.
• Tsika Injection muforoma.
• Kuumbwa kwepurasitiki.
• Kupenda, kudhinda hunyanzvi, kuungana.
Mould Factory, Mould Vagadziri, Jekiseni Kuumbwa Nesimbi Inoisa, Plastic Kuisa richigadzirisa, Tsika Mould, Prototype Mould Vagadziri,